Newcastle Oo Lugaha Isaga Martay Liverpool Iyo Af-kala Qaadkii Klopp | Himilo Media Group
Newcastle Oo Lugaha Isaga Martay Liverpool Iyo Af-kala Qaadkii Klopp
Kooxda Liverpool ayay soo martay galab kale oo jah-wareer iyo khal-khal kadib markii ay xejisan kari weyday gool ay hogaanka ku qabatay barbar dhac 1-1 ahna ay ku kala baxeen Newcastle.
Tabobare Jurgen Klopp ayaa mar kale xaadir u ahaa kooxdiisa oo awooda ciyaarta maamulanaysa, fursado badana abuuraysa, laakiin mar kale ku fashilmay inay wax ka badan barbar dhac kala tagaan kooxda uu hogaamiyo tabobarohoodii hore ee Rafael Benitez.
Philippe Coutinho ayaa Liverpool u gacan galiyey hogaanka ciyaarta, markii uu kubad uu ka ganay masaafo 25 yard ah shabaqa dhex dhigay, laakiin difaac xumo darteed ayaa u saamaxday Joselu inuu goolka bareejaha ka xareeyo ka hor dhamaadkii qaybta koobaad.
Liverpool ayaa ciyaarta gacanta ku haysay qaybtii dambe oo dhan, laakiin ku guuldaraystay inay soo afjaraan rikoodhka tabobare Benitez ee ah inaanu waligii guuldaro kala kulmin ciyaar uu Liverpool ka hor tagay intii uu tabobaraha soo ahaa.
Naadiga uu hor joogaha u yahay Klopp waxay imika badiyaan hal ciyaar oo kaliya todobadii ciyaarood ee u dambeeyey dhamaan tartamada, waxaanay ku jiraan kaalinta todobaad ee liiska kala saraynta horyaalka Premier League.